China HuoXiangZheng Qi Wan ndị na-emepụta na ndị na-eweta ya | HEX
Na-akwado ahụ ike nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na usoro eriri afọ.
Patchouli, Perilla epupụta, Angelica dahurica, Atractylodes macrocephala (kpoo e ghere eghe), bee Tangerine, Pinellia (mere), Magnolia (nke e ji ginger), Poria, Platycodon, licorice, ite afọ, jujube, ginger.
Ngwa: Ọ dịghị onye
Ngwaahịa a bụ ọgwụ gbara ọchịchịrị na-acha aja aja; keisi, ụtọ na ubé ilu.
1. Ihe oriri kwesịrị ịbụ ọkụ.
2. Ọ bụghị ihe amamihe dị na ị toụ ọgwụ ndị China na-edozi n'oge ọgwụ.
3. Ndị ọrịa nwere ọrịa na-adịghị ala ala dị ka ọbara mgbali elu, ọrịa obi, ọrịa imeju, ọrịa shuga, ọrịa akụrụ, ụmụ nwanyị dị ime ma ọ bụ ndị ọrịa na-agwọ ọgwụgwọ ndị ọzọ kwesịrị ịnara ya n'okpuru nduzi nke dibịa.
4. daysbọchị atọ ka ị rụsịrị ọgwụ ahụ, mgbaàmà ya adịghị emeziwanye, ma ọ bụ agbọ agbọ na afọ ọsịsa pụtara ìhè, ihe mgbaàmà ndị ọzọ siri ike kwesịrị ịga ụlọ ọgwụ.
5. Were ya dị ka ojiji na onunu ogwu. Childrenmụaka na ndị agadi bụ ndị na-adịghị ike n'ụzọ anụ ahụ kwesịrị ịnara ya n'okpuru nduzi nke dọkịta.
6. Gakwuru onye dọkịta maka iji ya mee ogologo oge.
7. Ndi mmadu na-eme ka onodu ihe ojoo a ghara iji nlezianya jiri ya.
8. A machibidoro iji ngwaahịa a mgbe njirimara ya gbanwere.
9. mustmụaka ga-eji n ’nlekọta ndị okenye.
10. Biko tinye ngwaahịa a ka ụmụaka ghara iru ya.
Nke gara aga: Liu Wei Di Huang Wan
Osote: Gan Mao Ling (Mbadamba mbadamba ihe nkiri)
White willow wepụ ntụ ntụ